Eocene Epoch: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime oge ndị kpụrụ oge Paleogene nke oge nke Mesozoic bụ Eocene. Nke a bụ otu n'ime oge nwere nnukwu mgbanwe site na nyocha ala na usoro ndu. N'ime oge a niile, e guzobere nnukwu ugwu site na nkwekọrịta nke nnukwu kọntinent. Ihe ndi mmadu a na-akpali ekele maka mmetụta nke Mgbagharị kọntinent.
N'ihi mkpa nke oge a maka mmepe nke ndụ, anyị ga-arara post a iji kọwaa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Eocene.
3 Ihu Igwe Eocene
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe na-emegide ihe anyị kwuru na mbido, ọ bụ oge nkewa, ebe ọ bụ na nnukwu kọntinent Pangea, nke ruo ugbu a bụ naanị oke ala, na-ekewa ihe niile. Nnukwu umu ahihia na umu anumanu di iche iche gbasatara ma di iche iche, tinyere nnunu na umu anumanu.
Mkpokọta oge nke oge a bụ ihe dị ka nde afọ 23, kesara n'ime afọ 4. Ọ bụ oge mgbanwe nke mbara ụwa anyị gbanwere mgbanwe dị ukwuu site na nyocha ala, nke kacha dị egwu bụ nke anyị kpọtụrụ aha banyere nnukwu kọntinent Pangea, nke gbasiri ike wee mepụta kọntinent anyị maara taa. Ọ bụkwa oge jupụtara na nnukwu ihe omume ihu igwe nwere oke mkpa dị ka mmemme Azolla.
N'ime oge a, ọrụ ụwa dị elu nke rụpụtara na nkewa nke Pangea. Akụkụ ebe ugwu a maara dị ka Laurasia kewara ekewa ma mee ka nkewa nke ihe a maara taa dị ka Greenland, Europe na North America. Otu n'ime iberibe akwụkwọ ndị a nke kọntinent Pangea na-agagharị n'ihi ntụgharị ụwa ruo mgbe etinye ya n'ọnọdụ ya taa.
Otu iberibe Africa, nke a maara dị ka mpaghara ala India jikọtara onwe ya na kọntinent Eshia. Nke a bụ ihe a maara taa dịka Ala Peninsula. Ọ dị mkpa na na mbido oge Pliocene enwere ụfọdụ mpekere nke Pangea ka dị n'otu. Agbanyeghị, n'ihi mmetụta nke ịkpapo kọntinent ahụ abụọ dị iche. N'otu aka, Antarctica na-aga n'ebe ndịda ma nọrọ n'ọnọdụ ọ nwere ugbu a. N'aka nke ọzọ, Australia gbanwere ntakịrị n'ebe ugwu.
Banyere ozu mmiri, mgbanwe ndị ọzọ na-agbanwe n'oké osimiri na-enweghị oke osimiri n'ihi mmegharị nke nnukwu ala a. N'otu aka ahụ, Oké Osimiri Tetis kwụsịrị kpamkpam n'ihi njikọta dị n'etiti kọntinent Africa na Eurasia. Ihe megidere ya na Oke Osimiri Atlantic. N'okwu a, oke osimiri a na-agbasawanye ma na-enwetakwu ala n'ihi ekele mwepụ nke North America nwere n'akụkụ ọdịda anyanwụ. Oke Osimiri Pasifik nọgidere bụrụ nnukwu ala miri emi na nke kachasị ukwuu n’elu ụwa dịka ọ dị taa.
Banyere ihe ndi ozo di na Eocene, anyi choputara na obu oge nke nwere oke ihe omumu banyere ala nke otutu ugwu malitere rue taa. Na nkukota nke anyị kwurula n'etiti India ugbu a na kọntinent Eshia, ọ bụ nke guzobere agbụ igwe nwere ugwu kachasị elu n'ụwa a maara dị ka Cordillera del Himalaya. North America nwekwara ọrụ dị mkpa nke na-eme ka o guzobe ugwu Ndị Appalachi.
Ihu Igwe Eocene
Ọnọdụ ihu igwe n'oge oge Pliocene siri ike. Na mbido oge a, a dịtụ elu ihere okpomọkụ nke banyere 7-8 degrees na nkezi. Ọganihu a bụ naanị ahụmahụ mmalite. N'oge a a maara ya dị ka oke kachasị nke Paleocene. Na ngwụcha nke Eocene, ihe omume ọzọ mere nke gbanwere ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị adị. A na-akpọ ihe omume ahụ Azolla.
Mmụba nke okpomọkụ na mbido Pliocene mere ihe dịka nde 55 afọ gara aga. N'oge usoro a, enweghị ice ọ bụla na mbara ala. E nwere usoro ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ebe ndị oyi na-adịghị taa. Tụkwasị na nke a, a kwenyere na mmụba nke okpomọkụ ụwa bụ ihe carbon dioxide na-esi na mbara igwe n'ihi oke ọrụ mgbawa.
Ọnọdụ gburugburu ebe obibi ndị a na-akwụsi ike ka oge na-aga, ihu igwe wee bụrụ ọchịchị dị elu karịa obere mmiri ozuzo. Agbanyeghị, ka oge na-aga, ọnọdụ ndị a yiri ka ọ ga-akwụsi ike ma mmiri ozuzo lọghachi jupụta. N'ihi nke a, ihu igwe ụwa ọ ghọrọ mmiri mmiri ma na-ekpo ọkụ, na-adịgide n'akụkụ ka ukwuu nke Eocene.
N'etiti Eocene ka ihe omume ihu igwe a anyị kpọrọ Azolla mere. Nke a bụ mbelata okpomọkụ dị ka nsonaazụ nke ikuku ikuku nke carbon dioxide. Ọnọdụ ndị a dugara na nchịkwa a na-achịkwaghị achịkwa nke ụdị fern a na-akpọ Azolla folliculoides, ya mere aha mmemme a.
Ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke ụwa kwere ka ezigbo mmepe nke ụdị dị iche iche, anụmanụ na osisi. N’oge nile nke Eocene, enwere otutu ihe di iche-iche na ihe dị iche iche dị ndụ site na ihu igwe na ihu igwe.
Banyere flora, enwere mgbanwe mgbanwe pụtara ìhè n'ihi ọnọdụ ihu igwe. Enwere oke ohia na oke ohia na obere ihe akaebe nke okporo osisi n'ihi okpomọkụ dị elu. Nanị ihe ndị e kere eke dị n'ime ala ma ọ dịkarịa ala, ọtụtụ osisi, bụ usoro ihe ọkụkụ ndị ahụ.
Banyere umu anumanu, umu anumanu di iche iche di iche iche, karie nnunu na anumanu. Nnụnụ ndị ahụ nwere ihe ịga nke ọma n'ihi ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma na ụfọdụ n'ime ụdị ndị a bụ anụ ọjọọ na-eri anụ na otu abụọ nke ihe dị ndụ. E nwere otu nnụnụ dị iche iche nke ejiri oke dị ukwuu ejiri mee ka a mata site na ịdị adị nke ihe ndekọ fosil.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oge Eocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Eocene epoch
Daalụ nke ukwuu maka post a ... doro anya ... M hụrụ ya n'anya